Briefing by Russian Defence Ministry (June 11, 2022)
Briefing by Russian Defence Ministry (June 11, 2022) The Armed Forces of the Russian Federation…
Briefing by Russian Defence Ministry (June 10, 2022)
Briefing by Russian Defence Ministry (June 10, 2022) Engineering units of the Russian Armed Forces…
Briefing by Russian Defence Ministry (June 9, 2022)
Briefing by Russian Defence Ministry (June 9, 2022) Engineering units of the Russian Armed Forces…
၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် တွေ့မြင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံ ရေတပ်စွမ်းအားကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် တွေ့မြင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံ ရေတပ်စွမ်းအားကို ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ရေတပ်၏ ရေတပ်စွမ်းအား (Surface Force) မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာနိုင်သည်ဆိုသည့် စာရွက်စာတမ်းကို…
ကမ္ဘောဒီးယားကြည်းတပ်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ AR2 300mm MLRS အတွဲလိုက် ဒုံးပစ်လောင်ချာယာဉ်များကို လက်ခံရရှိခဲ့
ကမ္ဘောဒီးယားကြည်းတပ်သည် တရုတ်နိုင်ငံမှ AR2 300mm MLRS အတွဲလိုက် ဒုံးပစ်လောင်ချာယာဉ်များကို လက်ခံရရှိခဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် Jesus Roman…
Briefing by Russian Defence Ministry (June 8, 2022) …
လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်အပေါ် သုံးသပ်ချက်များ
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ၌ KIA နှင့် KNU အပါအဝင် အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ထိုကြောင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်မှု…
Integration Processes: Russia and ASEAN Roundtable Program သို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခြင်း
Integration Processes: Russia and ASEAN Roundtable Program သို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခြင်း ၁. ၆. ၂၀၂၂ သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်…
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် သတင်းအချက်အလက် ကောက်နုတ်ချက်များ (နိုင်ငံတကာ)
Download ရယူရန် APR International Monthly Diary
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် သတင်းအချက်အလက် ကောက်နုတ်ချက်များ (မြန်မာ)
Download ရယူရန် APR Local Monthly Diary